दुखद खबर ! युवालाई यसरी कतारमा फाँ सी,छोराछोरी र श्रीमतीको यस्तो बे हाल (भिडियो हेर्नुस्) – Sandes Post
April 25, 2022 1121
कठै बरा , यो कस्तो बिजोग , के के पनि सुन्न पर्छ । कतारमा ग्याङ फा इट हुदा निर्दोस एक नेपालिलाइ फाँ सीको सजाय सुनाइको छ। स साना छोरा छोरी अनि श्रीमती रुदा रुदै कति दिन र रात बितिसकेको छ। यो कस्तो बिजोग ।
सबै जनाले सहयोग गरि मेरो श्रीमान् लाई बचाइ दिनुस मेरा यति साना बाल बच्चा छन म कसरि बचाउनु। सबैले सहयोग गरेर बचाइ दिउस भन्दै सनै सामु भन्नू भएको छ। कृपय सहयोग गर्नुहोलां।
Prevकेकीले बोलाइनन् की बेनिशा आँफै गइनन् केकीको विबाहमा ?
Nextतालमेलमा समस्या आयो, सबै एमालेले जित्ने भोः चित्रबहादुर केसी